နိုင်ငံတကာက ဟပ္ပီးနယူးရာ လက်ရွေးစဉ်ဓာတ်ပုံ – HAPPY NEW YEAR! | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Education » နိုင်ငံတကာက ဟပ္ပီးနယူးရာ လက်ရွေးစဉ်ဓာတ်ပုံ – HAPPY NEW YEAR!	9
Posted by Kyaemon on Jan 7, 2015 in Education, Entertainment, Environment, Photography, Style & Beauty, Travel, World News |9comments
နှစ်သစ်ကူးမှာ ရွာသူရွာသားအပေါင်း ကျန်းမာရွှင်လန်းကြပါစေ၊
ပွဲဦးထွက်က ဩစတေးလျ Australia က ပါ
အဇာဘာဂျန် (အာရှအလယ်ပိုင်းက) Azerbajian ပါ
နီပေါ Nepal က ပါ
ဘရာဇယ် Brazil ကပါ
kyeemite says: .Kyaemon ဂျီး ပျောက်နေတာကြာပါပေါ့..နှစ်သစ်ကူးမှရောက်လာတော့တယ်
.မင်္ဂလာနှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေဗျား Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4010
manawphyulay says: မတူတဲ့ မြင်ကွင်းတွေနဲ့အတူ နှစ်သစ်မှာ ပြန်လာတဲ့အတွက် ၀မ်းသာမိပါတယ်…
ဒါနဲ့ စကားမစပ် ဘယ်ရောက်နေတာလဲဟင်…
kai says: ကမ္ဘာ့ခရီးသွား.. ကြေးမုံတယောက်… ဘယ်တွေများပါတ်နေတယ်မသိ..။
“ဟပ္ပီး” စာလုံးအရေးလေး..ကြိုက်နှစ်သစ်ပါ၏..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1327
Yae Myae Tha Ninn says: ကိုယ့်ထက်တောင် ပျောက်တဲ့ သူ ပြန်ပေါ်လာ… မင်္ဂလာပါဗျာ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12069
Maung Thura says: ပျောက်ချက်သား ”ကောင်း”နေတယ်နော… ။
နှစ်သစ်မှာ လူဟောင်းကြီးတွေကို အခုလို ဘွားခနဲ ပြန်တွေ့ရတာ ” 1 သာ ” ပါကြောင်း
Paing Lay says: နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေဗျာ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 966
Kyaemon says: ရွာမှရောင်ရင်းမိတ်ဆွေတွေက
ခဏ အနား ယူတာပါ၊
အနောက်နိုင်ငံမှာလဲ Continuing Education ဆိုတာရှိတယ်၊
ကျွမ်းကျင်သူ လိုင်စင် အတွက်စာဘတ်ရတယ်၊
Ma Ma says: Kyaemon ပီသစွာ နှစ်သစ်ကူးပုံများနှင့်အတူ ပြန်လာတာ ကြိုဆိုပါတယ်။ (အသစ်အသစ်ထွက်လာတဲ့စာ
ဒီမှာလည်း လုပ်ငန်းခွင်ဝင်နေသူတွေအတွက် အဲလိုစဉ်ဆက်မပြတ်လေ့လာရေး၊ သင်ကြားရေးအစီအစဉ်တွေရှိရင်ကောင်းမယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 966
Kyaemon says: Ma Ma says:
အမြဲတစေ သတိပြုပြီး ချက်ချင်းထောက်ပြနိုင်ခြင်း